शब्दकोश: ऊ बच्चैमा बूढो भयो !
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 05, 2009
Sujan Sharma September 05, 2009
तपाईंका हरेक पाइलाहरु प्रगतिको बाटोतिर लम्किरहुन।तपाईको हरेक पल सुखमय होस्।
आकार September 06, 2009
बच्चै मा बुढो भयो भन्ने शीर्षक अनि यसको विषयवस्तु चाँहि अलि चित्त बुझेन है !
सूर्य/सिकारु September 06, 2009
के के नै होला भनेर मस्की-मस्की पढेको त घुमाई फिराई जन्मदिनमा पो पुरयाउनुभएछ धाइबा जी ले त । हा! हा!! हा!!!
शुभकामना जन्मदिनको अनि दिर्घायुको कामना पनि
फलोस फूलोस जिन्दगी
काँडा पन्छाएर कसैलाई नघोची
केबी चाम्लिङ September 06, 2009
उडिरहेको चरालाई एक्कासी गोलीलागे झै भयो,मिठा कुराहरु खादाखादै सकिन्छन,अझ धेरै भईदिएको भए असन्तोषी मान्छे !!!
शिर्षक सँग म चाँही पुरै सहमत् छु,बच्चैमा बौदिकताले परीपक्वता पाइसकेको छ । यो बौदिकताको बुढेउली हो।
हरेक पाइलाहरु प्रगतिमय मार्गमा हिडिरहुन, शुभकामना जन्मदिनको धाईबा जि लाई ।
Dilip Acharya September 06, 2009
मानिसको उमेर दुई थरीको हुन्छन। एउटा शारीरिक, अर्को बौद्धिक वा मानसिक ।
त्यसैले म पनि बच्चैमा बूढो हुनु सम्भव देख्‍छु । (वा यसैलाई उल्टा गर्दा बूढो हुँदासम्म बच्चै रहन पनि सक्छन कोही-कोही)
जे होस बौद्धिक र मानसिक रुपमा सधैं पाको र शारीरिक रुपमा सधैं जवान रहनुहोस ! जन्मदिनको शुभकामना ।
खुल्लामन्च September 06, 2009
जन्मदिनको मंगलमय शुभकामना, मित्र धाइबाजी । तपाईंका प्रत्यक पाइलाहरु हरपल सफलतातिर मात्र लम्किरहुन, यही कामना छ, परदेशबाट । राम्रो लेख, रमाइलो लाग्यो ।
आशा September 06, 2009
धाइबा जी सर्वप्रथम २४सौ बसन्त पार गरी २५सौ बहारमा पाइला राख्नुभएको जन्मदिनको बिशेष अवसरमा तपाईंको उन्नती,प्रगती र सु-स्वास्थ्यको निम्ती हार्दिक मगंलमय शुभकामना तथा बधाई ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
लेख चाखलाग्दो छ, उस्तै परिपक्वताको अनुभुती मिल्छ । तपाईंको लेख्ने शैलीको बयान नगरिरहन सक्दिन ।
माफ गरिदिनुस् है बर्षमा गल्ती हुन गएछ, हुन त मान्छेलाई कहिले पनि बुढो हुन मन पर्दैन रे अब जे भएपनी प्राकृतिक प्रकृयालाई स्वीकार नगरि अलग हुन कहाँ सकिन्छ र :)
Basanta September 07, 2009
धाईबाजी, जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना! तपाईँको जिन्दगीका सबै आयामका सबै यात्राहरु सफल र सुखमय रहुन्!
दीपक जडित September 07, 2009
जन्मदिनको साँच्चै धेरै शुभकामना !
हो बाँची ल्याएका धेरै मोडहरुमा एउटा बच्चा बच्चा रहँदैन बरु अर्को मोडमा उ अझै अलिकति बुढो हुन्छ । तपाईंको अनुभूतिमा डुबेँ कि तैरिएँ म खै कुन्नि तर आज जति महत्वपूर्ण हिँजो त थिएन नै भोली पनि हुने छैन । प्राप्ति र प्रयत्न त टेकिसकेको पाईला र टेक्नुपर्ने पाईला न हुन् ।
Jotare Dhaiba September 08, 2009
शुभ कामनाका लागि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ।
आकारजी, मैले एउटा मान्छे समयको अनेकौँ घम-पानीले रापिएर
अनुभवी र वैचारिक रूपमा पाको हुन्छ भन्नेतर्फ इङ्गित गर्न खोजेको हुँ, अर्थ नखुलेकोमा माफी दिनुहोला है ।
प्रबिण थापा September 08, 2009
धाईबाजी, जन्मदिनको शुभकामना!